विद्युतीय धरापमा दुवै खुट्टा गुमाएका हरी सगरमाथा चुमेर विश्वकृतिमानी राख्ने तयारीमा ! | Rock Star News Online
Home रोचक विद्युतीय धरापमा दुवै खुट्टा गुमाएका हरी सगरमाथा चुमेर विश्वकृतिमानी राख्ने तयारीमा !
ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना भएको केही बर्षमै विद्युतीय धरापमा दुवै खुट्टा गुमाएका हरी बुढामगर, कृत्रिम खुट्टाको सहारामा दैनिकी विताइरहेका छन्, सम्मानपूर्वक अनि सफलता पुूर्वक ।तर उनको कारुणिक कथा छ।हरी..अर्थात जसको डायरीमा असफलता छैन…..।उनै हरी बुढामगर अव विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चुम्ने तयारीमा छन् । हरी बुढामगर, स्थायी घर रोल्पाको मिरुल, हाल संयुक्त अधिराज्यको लण्डनमा आप्रवासी नेपाली । रियलस्टेटको विजनेसमा छन् । केही सामाजिक संघसंस्थासंग जोडिएका छन्, सामाजिक अभियानमा लागेका छन् ।
यदि उनको सगरमाथा यात्रा सफल भयो भने यो विश्वकृतिमानी हुने छ ।पैतालिस मिनेट टाढा रहेको स्कुलमा खाली खुट्टा पैदल जान्थे, कापी कलमको अभावमा खरीले स्लेटमा लेख्थे । जसो तसो एसएलसी पास गरे । बुवाको चाहना अनुसार गोरखा पल्टनमा भर्ति भएर ब्रिटिस लाहुरे बने । ११ बर्षमै उनको विवाह भएको थियो । बुवाले भर्ति हुन पाएनन्, यद्धपि उनले एउटा छोरालाई भर्ति होस भन्ने चाहन्थे, त्यसैले हरी भर्तिमा लागे । सायद एसएलसी उत्तिर्ण भएपछि गाउंँमा पियनको जागिर पाएको भए म ब्रिटिस आर्मीमा जाने थिइन ।
दैनिकी अर्कै हुन्थ्यो होला अहिले सम्झन्छन हरि….।ब्रिटिस गोरखा आर्मीमा रहंदा नेटो (उत्तर एटलान्टिक सन्धी संगठन)को मिसनमा अफगानिस्तान पुगे । सन २०१० अप्रिल १७, दिउँसोको समय थियो । अफगानिस्तानमा विद्रोहीहरुको जगजगी थियो , जुनवेला अमेरिकाको ट्वीन टावर आक्रमणको तयारी पनि थियो, सायद । कुनै गाउँंमा खानेपानी इनारको मर्मत गर्न इन्जिनियर सहितको टोली लिएर जाने क्रममा उनी विष्फोटमा परे । २५ जनाको समुहमा उनलाई मात्र बम लाग्यो, दुवै खुट्टा गुमाए, पछि जिन्दगीको पोल्टो फेरियो ।
मैले गोली खाने छु भन्नेमा म ढुक्क थिएं, नमरुन्जेल लड्छु भन्ने अठोठ थियो, किनकि म बहादुर गोरखा बनेर युद्धस्थलमा गएको थिएं, तर संयोग म मर्न सकिन, पुरा भएर जिउन पनि सकिन । अहिले जस्तो कृतिम खुट्टा थिएन, ह्वील चियरमा बस्थें, सन्सार सांघुरिंदै गएको अनुभुति हुन थाल्यो । अपांगको दैनिकीले यति विरक्त भएंकी म त्यो वेला सुसाइडको मोडमा थिएं, रक्सी सेवनमा दैनिकी बित्न थाल्यो । रक्सी नपिए दुवै हात काप्थे, हरेक अंग चलायमान बन्न सक्दैनथे ।एक दिन मैले यस्तो अठोट गरें, कि म मरेर समस्या समाधान हुने छैन, किनकि मेरो सहारामा घर परिवार पनि छन् ।
भर्खरै विहे गरेकी अर्धागिनी र साना छोराछोरी, मैले सुसाइड गरिहाले भने उनीहरुको अवस्था के होला ?, अनि म जस्तै अपांगहरुले कसरी जिउन सिक्लान ?जिउने कलाको खोजिमा लागें । एक दिन सहासी स्काइड्राइभिङमा तयार भएं । त्यसबाट मैले दुईवटा सम्ंभावना देखेको थिएं, कि मरिन्छ, यात विश्व रेकर्ड ब्रेक हुने छ । सफलता पाएं, जिउने आंट र आधार बढ्न थाल्यो । ‘मलाई लाग्यो, अव जे पनि गर्न सक्छु’—हरी भन्छन्, तपाईको एउटा मात्र अंग चल्यो भने, संसार टर्न गर्न सकिन्छ ।
दुवै खुट्टा गुमाएपनि उनले एथ्लेटिक्समा एउटा मेडल जिते, आर्चरीमा भने गोल्डमेडलनै हातपारे । जसले पनि उनको उत्साह बढाइदिएको छ ।मैले अपांगता रोजेको पनि होइन, अपांग हुन्छु भनेर सोंचेको पनि थिएन, गोली लाग्छ भन्ने चाहि निश्चित थियो, हरीले भने । अपांग भएकै अवस्थामा गोरखा ग्रुप खुलेको थियो, जसले शिक्षाको उज्यालो फैलाउने पहिलो काम थियो, म त्यसैमा जोडिएं, गोरखा ग्रुपको शेयर होल्डर बनें ।अहिले हरी सगरमाथा चुम्ने तयारीमा छन् । त्यसकालागी उनले अभ्यास केही बर्ष अघिनै थालेका थिए ।
यस अघिनै उनले ६ हजार ५८ मिटर अग्लो चोलु सिफारु हिमालको सफलतापुर्वक आरोहण गरिसकेका छन् । सगरमाथा चढ्नकालागी टिम बनाइसकेका छन् । उमेर ४० बर्ष पुग्न थालेको छ । सन २०२०को एक्सपिडिसन टिममा उनी सगरमाथा आरोहणमा जाने छन् । त्यसकालागी रेस्क्यु टिम पनि बनिसकेको छ । शेर्पाहरुसँंग समन्वय पनि भैरहेको छ । सायद सगरमाथा चढ्ने कृतिम खुट्टा लगायतका सामाग्रीहरु र आर्थिक व्यावस्थापनकालागी स्पोन्सर समेत भेटिएला ।‘म मेरो नेपाल र वीर गोरखालीकालागी सगरमाथा चढ्न चाहन्छु, किनकि मलाई सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ’ हरी भन्छन्, जुनवेला भर्टिकल्ली मैले सगरमाथा चुमेको हुनेछु, त्यो वेला गोरखा ग्रुपले होरिजन्टल्ली धर्तिभरी शिक्षाको विउ छरीरहेको हुने छ ।
गोरखा ग्रुपसँंग पनि उनले आगाध स्नेह व्यक्त गरे । उनको अभियानको नाम हुने छ, ‘लाइफ इज अल एवाउट एभ्रेष्ट’।हरी भन्छन्, अर्को कुरा म अव डिसेवलका क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छु, जसकालागी एउटा डिसेवल रिह्याविटेशन सेन्टर खोलीने छ, जसले खुट्टा नभएकाहरुलाई कृतिम खुट्टा उपहार दिन सकोस । त्यसो त हरीले अचेल लगाउंदै आएका कृतिम खुट्टाको बजार मुल्य ६० हजार पाउण्ड पर्छ, यद्धपि यी कृतिम खुट्टा उपहार उनलाई वेलायतको अटोवा कम्पनीले दिएको हो । यी खुट्टाहरु सगरमाथा चढनकालागी भने उपयुक्त हुने छैनन्अ
र्को प्रकृतिका कृतिम खुट्टाको जोहो भैसकेको छ । त्यसो त उनको टिम अघिल्लो बर्षनै सगरमाथा चुम्ने तयारीमा थियो, तर नेपाल सरकारले दुवै आंँखा नदेख्ने र दुवै खुट्टा नभएकालाइ सगरमाथा चढ्ने अनुमति दिएन । पछि उनीहरु यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत गए । अदालतले चढ्नकालागी स्वीकृति दिएपछि बल्ल उनीहरुको दोस्रो तयारी सुरु भैसकेको छ । ‘उमेरले नेटो काटिसकेको छ, अव सायद २ बर्ष मात्र बांँकी छ सगरमाथा चढ्नकालागी, त्यसैले जोडतोडकासाथ हाम्रो अभियान अघि बढ्ने छ’—हरीले भने ।अर्को कुरा उनी रोल्पालाई पनि चिनाउन चाहन्छन् ।